Ku cusbooneysii shaashadda shaashadda buuxda ee websaydhkaaga 10kan beddelaad | Abuurista khadka tooska ah
10 menus CSS shaashad buuxda oo loogu talagalay degel kasta
Manuel Ramirez | | CSS, Naqshadeynta Webka
ka shaashadda CSS ee shaashadda buuxda Waxay ku habboon yihiin adeegsiga sawirro waaweyn oo u muuqda inay xoogga saaraan mawduuca websaydhka, ha noqoto bog degitaan, goob sawir qaadasho ama xitaa eCommerce halkaas oo aan dooneyno inaan ku muujino badeecad gaar ah.
Taxanahan oo ah 10 shaashad buuxda ama shaashad CSS shaashad buuxda leh raac heerarka hadda jira waxayna noo horseedaan inaan soo bandhigno sheygan dheeriga ah ee tayada ku jira naqshadeynta websaydhka ee ay tahay inaan maanta eegno. Waxaan horey u raacnay taxane kale oo maqaalo la mid ah, sida menus dhinaceeda bari o kan kale. Aynu raacno 10-ka shaashadood ee CSS ee shaashadda buuxa leh.
1 Liiska shaashadda oo buuxa
2 Wareeg shaashad buuxda
3 Liiska shaashadda oo buuxa
4 Menu shaashadda Flexbox
5 Wareeg shaashad buuxda
6 CSS menu buuxa
7 Liiska shaashadda oo buuxa
8 Saafi CSS3 menu shaashad buuxda
9 Wareeg shaashad buuxda
10 Saafi menu CSS
Liiska shaashadda oo buuxa
Koodhkan iyadoo xoogaa Flexbox iyo jQuery ah wuxuu noo keenayaa shaashad shaashadaysan oo shaashad buuxda leh oo u taagan animation-keeda saxda ah. Animation-kaas ayaa na hor dhigaya qaybaha kala duwan. Ku habboon in la cusbooneysiiyo boggeena maanta.
Wareeg shaashad buuxda
Liis kale oo shaashad buuxda ah oo hadda socda oo siman iyo animation kala guur ah oo si wanaagsan loo bixiyay taas oo noo geynaysa qaybaha kala duwan ee ka muuqda cabir ahaan. La yaab leh oo aad u qurux badan.
Liis-shaashad-shaashad-dhammaystiran oo yar oo soo socota tayada kuwii hore, in kastoo fikrad ahaan way ka fududdahay. Tani macnaheedu maaha inay tahay mid kale oo tayo sare leh in la cusbooneysiiyo degelkeenna oo laga dhigo mid u taagan martida.
Menu shaashadda Flexbox
Liiskaan aan si sax ah uga bixin IE. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa mid tayo muuqaal ah oo weyn oo noocyada macaamiisha ah ee raadinaya wax ka duwan, laakiin taasi waxay leedahay muuqaal xirfadlayaal ah. Si aad u wanaagsan ayaa loo fuliyay inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu khaaska ah liiska.
Waxaan dooneynaa inaan kugu adkeino taxanahan taxanaha ah. Tan kale waa aad u xarrago leh oo xambaarsan animation kala guur oo habsami leh. Aad bey ufudud u tahay websaydhkaaga. Ma seegi kartid, sidaa darteed waxaad haddaba haysataa ikhtiyaar inaad ku cusboonaysiiso websaydhkaaga noodh sida kan lagu bixiyo codepen. Waxaan kugula talineynaa inaad aragto tusaalaha si aad ula macaamili karto oo aad markaa fikrad dhow uga hesho sida ay u ekaan laheyd.
CSS menu buuxa
Shaashadan shaashadda buuxda leh ayaa ah ee ugu fudud liiska oo dhan. Astaamaha hamburger oo ku yaal dhinaca midig iyo menu-ka soo baxa marka aannu riixno, oo ku yaal bartamaha shaashadda. Waxay mudan tahay in loogu yeero shaashad shaashad buuxda laga sameeyay CSS.
Shaashadan shaashadda buuxda leh waa nadiif CSS iyo ka sii madow mugdiga sidaa darteed ka dib markaad riixdo batoonka hamburger waxaan ka soo muuqaneynaa xulashooyinka kala duwan ee menu oo leh animation biyo-dhac si fiican loo qaabeeyey. Wanaagsan waa shaki la'aan.
Saafi CSS3 menu shaashad buuxda
Liis shaashad buuxda leh leh taxane ah oo kala guur ah iyo saameyn la soo saaray CSS3 saafi ah. In yar oo rimidda ah, inkasta oo aan laga maqnaan karin liistadan inay ahaato mid aad uga duwan kuwa kale.
Saafi menu CSS
Waxaan ku dhammeyneynaa liiska shaashad shaashad buuxda oo lagu sameeyo CSS saafi ah. Markan waxaan leenahay badhanka hamburger ee dhanka bidix shaashadda oo dhaqaajisa animation-ka goobada u furan si loo muujiyo qaybaha kala duwan ee menu-ka. Waxaa laga yaabaa in ku-meel-gaadhka uu gaabis yahay, laakiin waa la isku habeyn karaa in lagu dhejiyo annaga oo jecel.
Waan kuu daayey adiga taxane ah oo qaabab ah CSS sidaa darteed gelinta qoraalka oo noqon doonta mid raaxo leh oo loogu raaxeysto booqdaha shabakadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » 10 menus CSS shaashad buuxda oo loogu talagalay degel kasta
Adobe wuxuu Magento ku helayaa $ 1.680 bilyan
Habeenkii matxafyada ku yaal Madrid, waa wareeg aanad seegi karin